အိမ်ရှင်မတိုင်းအတွက် လတ်တလော အသုံးဝင်သော ဖြေရှင်းနည်းလေးများ - Barnyar Barnyar
March 4, 2022 KNOWLEDGE 0
၁။ ဆားအခတ်များသွားလျှင် အာလူးအလုံးလိုက် (၂ / ၄)လုံးထည့်ပါ။ ၂။ ပဲပြုတ်သည့်အခါ စားချင်သဖွယ်…. အိအိဖောင်းဖောင်း စိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်အောင် ရေလဲပြီးသောအခါ ရေအနည်ငယ် ထည့်၍ ထန်းလျက် (၂)လုံးခန့် ထည့်ထားလိုက်ပါ။
၃။ ကန်စွန်းရွက်ကို အစိမ်းရောင်လေး အတိုင်းပဲ စားချင်သဖွယ်ဖြစ်လိုပါက အဖုံးမအုပ်ပဲ ကြော်ပါ။ ၄။ ဒန်အိုးဒန်ခွက်များ ပြောင်စင်လိုပါက ဂေါ်ဖီထုတ်မှ အရွက်ကြမ်းဖြင့် ပွတ်တိုက်ပါ။
၅။ လက်ဘက်ရည်အိုး၊ခွက်၊ အစွန်း အထေးများပြောင်စင်လိုပါက ဆော်ဒါ (သို့မဟုတ်-လက်ချားအမှုန့်) ထည့်ပြီး ညသိပ်ထားပါ။ ၆။ အိမ်သာကြွေခွက်,ကျောက်ပြားများ သန့်ရှင်းလိုပါက လက်ချားမှုန့်နှင့် ရှောက်ရည် ရောစပ်ပြီး ပွတ်တိုက်ပါ။
၇။ ယင်ပေါလျှင် ဖယောင်းတိုင် (၂)တိုင် ထွန်းပါ။ ၈။ အင်္ကျီကော်လံမှ ဆီချေးများကို ရှန်ပူခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့် ပွတ်တိုက်လျှော်ပါ။
၉။ ပုရွက်ဆိတ်မလာလိုသော် ကန့်မှုတ်ကို နည်းနည်း ဖြူးပေးပါ။ ၁၀။ ဟင်းရဲ့အနံ့အသက် လက်မှာစွဲ နေလျှင် မာလကာရွက်နဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
၁၁။ အာလူးနွမ်းပြီး မလတ်ဆတ်သော် မှန်ရောင် သကြား အနည်းငယ် ထည့်ပြီး ပြုတ်ပါ လတ်ဆတ်တဲ့ အာလူပြုတ်လိုပဲ အရသာ ကောင်းပါလိမ့်မည်။ ၁၂။ ဟင်းချိုလိုသော် ဘူးသီးခြောက်ခတ်ပြီး သောက်ရင်ချိုပါသည်။
၁၃။ မီးပူလောင်သော် ကွမ်းရွက်နဲ့ သကြားကို ရောကြိတ်ပြီးအုံပါ။ ၁၄။ အဝတ်မှင်စွန်းသော် ရေနံဆီသန့်သန့် အစက်ချဆွတ်ပြီး ဆပ်ပြာနဲ့ လျှော်ဖွတ်ပါ။
၁၅။ ကြမ်းပိုးရှိသော် ရေနံဆီနဲ့ မကြာမကြာကြမ်းတိုက်ပါ။ ၁၆။ ခံတွင်းနံ့မကောင်းသော် သွားပွတ်တံမှာ ပရုတ်ရည် တစ်စက်နှစ်စက်ထည့်ပြီး သွားတိုက်ပါ။(သို့မဟုတ်) ပရုတ်မှုန့်ထည့်ပြီး သွားတိုက်ပါ။
၁၇။ ဟင်းများဆားငန်သော် မီးခဲရဲရဲ တစ်ခဲထည့်ပါ။(၂) မိနစ်ခန့်ကြာ၌ ပြန်ထုတ်ယူပါ။ ၁၈။ ကွမ်းသွေးစွန်းသော် ခရမ်းချဉ်သီး ပွတ်တိုက်ပေးပြီးလျှော်ပါ။
၁၉။ နွားနို့မချဉ်အောင်ထားလိုသော် နွားနို့ထဲသို့ ငရုတ်သီးစိမ်း (၃)တောက် အညှာဖြုတ်ပြီး ထည့်ထားပါ။ ၂၀။ ပရွတ်ဆိတ်များ မလာလိုသော် သခွားသီးအားပါးပါးလှီးပြီး ချထားပါ။
၂၁။ ဖန်ဖွက်ထဲ ရေနွေးပူပူထည့်လိုသော် ဇွန်းတစ်ချောင်းကို ဖန်ခွက်ထဲ အရင်ထည့်ပြီး ရေနွေးပူပူ ဖြေးဖြေးထည့်ပါ။ ၂၂။ သံချေးစွန်းသော် အကြမ်းပန်းကန်တစ်လုံးခန့် ဆန်ပြုတ်၍ စွန်းသောအဝတ်ကို (၅)နာရီခန့် စိမ်ပြီး ဆပ်ပြာဖြင့် ဖွတ်လျှော်ပါ။
၂၃။ ကြွက်များပြေးလိုသော် ရှိန်းခိုကို ရေဖျော်၍ ကြွက်လာ လမ်းတွင်ဖျန်းထားပါ။ ၂၄။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်သော် ထောပတ်အနည်းငယ် ရှုပါ။
၂၅။ ဒူးရင်းသီးတောက်သော် ဒူးရင်းသီးအခွံထဲ ရေထည့်၍ သောက်ပါ။ ရေဝအောင်ချိုး၊ မင်းကွတ်သီးစားပေးခြင်း တို့ဖြင့် ပျောက်ကင်းပါသည်။ ၂၆။ ပိုးဟပ်ပြေးလိုသော် လေးညှင်းပွင့်များ ထောင်း၍ ဖြူးထားပါ။
၂၇။ မှိုနှင့်တညင်းသီးတောက်သော် တောက်တာဥကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် သွေး၍ သောက်ပါ။ ၂၈။ သံပုရာသီး ကြာရှည်ထားလိုသော် ပုလင်းသန့်သန့်ဖြင့် လေလုံအောင်ထားပါ။
၂၉။ ခေါင်းကိုက်သော် လက်ဘက်ရည်ကျကျကျိုပြီးသားထဲ သံပုရာရည်ညှစ်ပြီး သောက်ပါ။ ၃၀။ မျက်နှာလှပ လိုသော် မျက်နှာမသက်မှီ သံပုရာသီးကို ထက်ခြမ်း ခွဲ၍ မျက်နှာပွတ်ပေးပြီး ရေနွေးနွေးဖြင့် ဆေးပါ အဖုအပိမ့် ကင်းစင်ပြီး ချောမွေ့စေမည်။
၃၁။ ခရီးသွား ကားမူးသော် ချက်ကို ပလာစတာလုံ အောင်အုပ် ကပ်ပြီး ခရီးသွား ကားမမူးပါ။ ၃၂။ ဆီးချိုရောဂါ အမြစ်ပြတ် လိုသော် ဆလတ်ရွက်ကို နေ့စဉ် ထမင်းစား တိုင်းတို့စရာ အဖြစ်စားပါ။
၃၃။ ရှောက်ပင်အသီးတင်လိုသော် ပင်စည်ကို အမဲရိုးများနဲ့ ကြပ်စည်းပေးပါ။ ၃၄။ ဒူးနာသော် ဘဲဥအကာလိမ်းပါ။
၃၅။ အနံ့ဆိုးကင်းလိုသော် အိမ်သာ (သို့မဟုတ်) ငါးပိ,ငါးခြောက်ထားရာ လူမမာ ရှိရာ အိမ်၏ မီဖိုချောင်ထဲမှာ ကျောက်ဖရုံသီးကို အပ်များဖြင့် အပေါက်ဖောက်၍ ချိတ်ဆွဲ ထားပါ။ ကျောက်ဖရုံသီးကား ညှော်နံ့နှင့် အနံ့ဆိုးများကို စုပ်ယူသည်။
မေတ္တာဖြင့် လမ်းပြကြယ် /
အိမျရှငျမတိုငျးအတှကျ လတျတလော အသုံးဝငျသော ဖွရှေငျးနညျးလေးမြား
၁။ ဆားအခတျမြားသှားလြှငျ အာလူးအလုံးလိုကျ (၂ / ၄)လုံးထညျ့ပါ။ ၂။ ပဲပွုတျသညျ့အခါ စားခငျြသဖှယျ…. အိအိဖောငျးဖောငျး စိမျ့စိမျ့လေးဖွဈအောငျ ရလေဲပွီးသောအခါ ရအေနညျငယျ ထညျ့၍ ထနျးလကျြ (၂)လုံးခနျ့ ထညျ့ထားလိုကျပါ။
၃။ ကနျစှနျးရှကျကို အစိမျးရောငျလေး အတိုငျးပဲ စားခငျြသဖှယျဖွဈလိုပါက အဖုံးမအုပျပဲ ကွျောပါ။ ၄။ ဒနျအိုးဒနျခှကျမြား ပွောငျစငျလိုပါက ဂျေါဖီထုတျမှ အရှကျကွမျးဖွငျ့ ပှတျတိုကျပါ။
၅။ လကျဘကျရညျအိုး၊ခှကျ၊ အစှနျး အထေးမြားပွောငျစငျလိုပါက ဆျောဒါ (သို့မဟုတျ-လကျခြားအမှုနျ့) ထညျ့ပွီး ညသိပျထားပါ။ ၆။ အိမျသာကွှခှေကျ,ကြောကျပွားမြား သနျ့ရှငျးလိုပါက လကျခြားမှုနျ့နှငျ့ ရှောကျရညျ ရောစပျပွီး ပှတျတိုကျပါ။
၇။ ယငျပေါလြှငျ ဖယောငျးတိုငျ (၂)တိုငျ ထှနျးပါ။ ၈။ အင်ျကြီကျောလံမှ ဆီခြေးမြားကို ရှနျပူခေါငျးလြှျောရညျဖွငျ့ ပှတျတိုကျလြှျောပါ။
၉။ ပုရှကျဆိတျမလာလိုသျော ကနျ့မှုတျကို နညျးနညျး ဖွူးပေးပါ။ ၁၀။ ဟငျးရဲ့အနံ့အသကျ လကျမှာစှဲ နလြှေငျ မာလကာရှကျနဲ့ ပှတျတိုကျပေးပါ။
၁၁။ အာလူးနှမျးပွီး မလတျဆတျသျော မှနျရောငျ သကွား အနညျးငယျ ထညျ့ပွီး ပွုတျပါ လတျဆတျတဲ့ အာလူပွုတျလိုပဲ အရသာ ကောငျးပါလိမျ့မညျ။ ၁၂။ ဟငျးခြိုလိုသျော ဘူးသီးခွောကျခတျပွီး သောကျရငျခြိုပါသညျ။
၁၃။ မီးပူလောငျသျော ကှမျးရှကျနဲ့ သကွားကို ရောကွိတျပွီးအုံပါ။ ၁၄။ အဝတျမှငျစှနျးသျော ရနေံဆီသနျ့သနျ့ အစကျခဆြှတျပွီး ဆပျပွာနဲ့ လြှျောဖှတျပါ။
၁၅။ ကွမျးပိုးရှိသျော ရနေံဆီနဲ့ မကွာမကွာကွမျးတိုကျပါ။ ၁၆။ ခံတှငျးနံ့မကောငျးသျော သှားပှတျတံမှာ ပရုတျရညျ တဈစကျနှဈစကျထညျ့ပွီး သှားတိုကျပါ။(သို့မဟုတျ) ပရုတျမှုနျ့ထညျ့ပွီး သှားတိုကျပါ။
၁၇။ ဟငျးမြားဆားငနျသျော မီးခဲရဲရဲ တဈခဲထညျ့ပါ။(၂) မိနဈခနျ့ကွာ၌ ပွနျထုတျယူပါ။ ၁၈။ ကှမျးသှေးစှနျးသျော ခရမျးခဉျြသီး ပှတျတိုကျပေးပွီးလြှျောပါ။
၁၉။ နှားနို့မခဉျြအောငျထားလိုသျော နှားနို့ထဲသို့ ငရုတျသီးစိမျး (၃)တောကျ အညှာဖွုတျပွီး ထညျ့ထားပါ။ ၂၀။ ပရှတျဆိတျမြား မလာလိုသျော သခှားသီးအားပါးပါးလှီးပွီး ခထြားပါ။
၂၁။ ဖနျဖှကျထဲ ရနှေေးပူပူထညျ့လိုသျော ဇှနျးတဈခြောငျးကို ဖနျခှကျထဲ အရငျထညျ့ပွီး ရနှေေးပူပူ ဖွေးဖွေးထညျ့ပါ။ ၂၂။ သံခြေးစှနျးသျော အကွမျးပနျးကနျတဈလုံးခနျ့ ဆနျပွုတျ၍ စှနျးသောအဝတျကို (၅)နာရီခနျ့ စိမျပွီး ဆပျပွာဖွငျ့ ဖှတျလြှျောပါ။
၂၃။ ကွှကျမြားပွေးလိုသျော ရှိနျးခိုကို ရဖြေျော၍ ကွှကျလာ လမျးတှငျဖနျြးထားပါ။ ၂၄။ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျသျော ထောပတျအနညျးငယျ ရှုပါ။
၂၅။ ဒူးရငျးသီးတောကျသျော ဒူးရငျးသီးအခှံထဲ ရထေညျ့၍ သောကျပါ။ ရဝေအောငျခြိုး၊ မငျးကှတျသီးစားပေးခွငျး တို့ဖွငျ့ ပြောကျကငျးပါသညျ။ ၂၆။ ပိုးဟပျပွေးလိုသျော လေးညှငျးပှငျ့မြား ထောငျး၍ ဖွူးထားပါ။
၂၇။ မှိုနှငျ့တညငျးသီးတောကျသျော တောကျတာဥကို ဆနျဆေးရညျနှငျ့ သှေး၍ သောကျပါ။ ၂၈။ သံပုရာသီး ကွာရှညျထားလိုသျော ပုလငျးသနျ့သနျ့ဖွငျ့ လလေုံအောငျထားပါ။
၂၉။ ခေါငျးကိုကျသျော လကျဘကျရညျကကြကြိုပွီးသားထဲ သံပုရာရညျညှဈပွီး သောကျပါ။ ၃၀။ မကျြနှာလှပ လိုသျော မကျြနှာမသကျမှီ သံပုရာသီးကို ထကျခွမျး ခှဲ၍ မကျြနှာပှတျပေးပွီး ရနှေေးနှေးဖွငျ့ ဆေးပါ အဖုအပိမျ့ ကငျးစငျပွီး ခြောမှစေ့မေညျ။
၃၁။ ခရီးသှား ကားမူးသျော ခကျြကို ပလာစတာလုံ အောငျအုပျ ကပျပွီး ခရီးသှား ကားမမူးပါ။ ၃၂။ ဆီးခြိုရောဂါ အမွဈပွတျ လိုသျော ဆလတျရှကျကို နစေ့ဉျ ထမငျးစား တိုငျးတို့စရာ အဖွဈစားပါ။
၃၃။ ရှောကျပငျအသီးတငျလိုသျော ပငျစညျကို အမဲရိုးမြားနဲ့ ကွပျစညျးပေးပါ။ ၃၄။ ဒူးနာသျော ဘဲဥအကာလိမျးပါ။
၃၅။ အနံ့ဆိုးကငျးလိုသျော အိမျသာ (သို့မဟုတျ) ငါးပိ,ငါးခွောကျထားရာ လူမမာ ရှိရာ အိမျ၏ မီဖိုခြောငျထဲမှာ ကြောကျဖရုံသီးကို အပျမြားဖွငျ့ အပေါကျဖောကျ၍ ခြိတျဆှဲ ထားပါ။ ကြောကျဖရုံသီးကား ညှျောနံ့နှငျ့ အနံ့ဆိုးမြားကို စုပျယူသညျ။
မတ်ေတာဖွငျ့ လမျးပွကွယျ /
မိဘတွေ နိုးထကြလော့ ၊ သားသမီးတွေကို ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ပစ်မထားကြနဲ့